ယခုနှစ် မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေကို ချေးငွေအကျေ ပေးဆပ်ပြီးသည့် တောင်သူများကိုသာ ချေးပေးသွား မည်
Post byစိုးချစ်ချစ်ပိုင်(AMIA) on Friday, May 03,2019
ချေးငွေအကြေ ပေးသွင်းပြီးသည့် တောင်သူများကိုသာ ထပ်မံထုတ်ချေးပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ- AMIA
ယခုနှစ် မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးစရိတ် ချေးငွေအဖြစ် တောင်သူများကို ဘတ်ဂျတ်ငွေ ကျပ်ဘီလီယံ ၁,၅၀၀ ကျော် ထုတ်ချေးပေးရန် လျာထားပြီး၊ ချေးငွေ အကျေပြန်လည် ပေးဆပ်ပြီးသည့် တောင်သူများကိုသာ ဆက်လက် ထုတ်ချေးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ သတင်းရရှိသည်။
“ ဘီလီယံ ၁၅၀၀ ကျော် လျာထားတယ်။ ကနဦး ရန်ပုံငွေ အနေနဲ့ကတော့ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းတွေကို ၁၃၀၁ ဘီလီယံ ကနဦးရန်ပုံငွေ အနေနဲ့ အရင်ခွဲဝေထားတယ်။ အလုပ်စလုပ်လို့ ရအောင်ပါ။ အရင်နှစ်က ၁၃၀၁ ဘီ လီယံ ချေးခဲ့တာပါ၊ ပိုတိုးလာမယ်လို့ ရည်မှန်းပြီးတော့ ဘီလီယံ ၁၅၀၀ ကျော် လျာထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ထပ် တောင်းတာတွေ အပေါ်မှာ မှုတည်ပြီး ထပ်ခွင့်ပြုသွားမှာပါ ” ဟု ယင်းဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ချေးငွေကို ယခုလ ၆ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ ထုတ်ချေးပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ ချေးငွေများ ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၅) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ချေးငွေနှုန်းထားမှာ စပါး သီးနှံ တစ်ဧကလျှင် ကျပ် တစ်သိန်းခွဲနှုန်း၊၊ အခြားသီးနှံများအတွက် တစ်ဧကလျှင် ကျပ် တစ်သိန်းနှုန်းဖြင့် ယခင်နှစ် နှုန်းထားအတိုင်း ချေးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
“ မနှစ်ကချေးငွေက အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် ရာခိုင်နှုန်း ၆၀ လောက် ပြန်ရထားပြီးပါပြီ၊ ဒီနှစ်မှာတော့ ကျေပြီးသား လယ်သမားတွေကိုပဲ ချေးသွားမှာပါ။ ငွေချေးကာလက စက်တင်ဘာထိ ရှိတာကိုး။ အဲကြားထဲမှာ ဆပ်ရင်း၊ ကျေရင်း၊ ချေးရင်းနဲ့ အဲလိုသွားတာပေါ့။ ချေးငွေ အသစ်ချေးမယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်စေ့တဲ့ အကြွေးတွေ ကျေဖို့ တော့လိုတယ်။ အဲစည်းကမ်းချက်ကတော့ ရှိတယ်လေ။ မိုးချေးငွေက ဧပြီ ၁၅ ရက်ကို နောက်ဆုံးထား ဆက်ရ မှာပါ။ ဒီကာလထက် ကျော်ပြီး မဆပ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ အထိုက်အလျောက်ပေါ့။ ဆိုတော့ ကျေတဲ့သူတွေကို အရင်ချေးသွားမှာပါ ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ယင်းချေးငွေအား ချေးပေးရာတွင် ယခင်နှစ်ကဲ့သို့ တောင်သူတစ်ဦးချင်း ပိုင်ဆိုင်သော လယ်ယာ လုပ်ပိုင်ခွင့် လက်မှတ် ပုံစံ (၇) မူရင်းကို လယ်ယာဘဏ်သို့ အပေါင်အဖြစ် ပေးအပ်၍ တောင်သူ တစ်ဦးချင်း ကိုယ်တိုင် အာ မခံသည့် စနစ်ဖြင့် ထုတ်ချေးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခင်က ၀ိုင်ကြီးချုပ်ပုံစံ အဖွဲ့လိုက် အာမခံစနစ်ဖြင့် ချေး ငွေ ထုတ်ချေးပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မှုဝါဒများနှင့်အညီ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေး ငွေများကို တောင်သူလယ်သမားများအား မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ တစ်ဆင့် ရာသီအလိုက် ထုတ် ချေးပေးလျက်ရှိရာ ယခုအစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် တစ်ဧက ချေးငွေနှုန်းထားများကို တိုးမြှင့်ထုတ် ချေးပေးခဲ့ သည်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စပါးချေးငွေ နှုန်းထားကို တစ်ဧကလျှင် ကျပ် (၁)သိန်းမှ တစ်သိန်းခွဲသို့လည်း ကောင်း၊ အခြားသီးနှံကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျပ် ၂၀,၀၀၀ မှ ၅၀,၀၀၀ သို့လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျပ် ၅၀,၀၀၀ မှ ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀ သို့လည်းကောင်း တိုးမြှင့်ထုတ်ချေးပေးခဲ့သည်။
ရန္ကုန်၊ မေ ၃
ယခုနွစ် မိုးရာသီ စိုက္ပ်ိုးစရိတ် ခေ်းငြေအျဖစ် တောင်သူမ်ားကို ဘတ္ဂ်တ်ငြေ က်ပ္ဘီလီယံ ၁,၅၀၀ ကေ်ာ် ထုတ်ခေ်းပေးရန် လ်ာထားပြီး၊ ခေ်းငြေ အေက်ျပန္လည် ပေးဆပ်ပြီးသည့် တောင်သူမ်ားကိုသာ ဆက္လက် ထုတ်ခေ်းပေးသြားမည်ျဖစ်ကြောင်ျးမန္မာ့လယ်ယာ ဖြံ့ဖြိုးရေးဘဏ္မွ သတင်းရရွိသည်။
“ ဘီလီယံ ၁၅၀၀ ကေ်ာ် လ်ာထားတယ်။ ကနဦး ရန္ပုံငြေ အေနနဲ့ကေတျာ့ပည္နယ္နဲ့ တိုင်းတြေကို ၁၃၀၁ ဘီလီယံ ကနဦးရန္ပုံငြေ အေနနဲ့ အရင္ခြဲဝေထားတယ်။ အလုပ္စလုပ္လို့ ရေအာင္ပါ။ အရင္နွစ္က ၁၃၀၁ ဘီ လီယံ ခေ်းခဲ့တာပါ၊ ပိုတိုးလာမယ္လို့ ရည္မွန်းပြီးတော့ ဘီလီယံ ၁၅၀၀ ကေ်ာ် လ်ာထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ထပ် တောင်းတာတြေ အေပ်ါမွာ မှုတည်ပြီး ထပ္ခြင့်ျပုသြားမွာပါ ” ဟု ယင်းဘဏ္မွ တာဝန်ရွိသူတစ်ဦးကျေပာသည်။
ခေ်းငြေကို ယခုလ ၆ ရက်နေ့မွ စက္တင္ဘာလကုန်အထိ ထုတ်ခေ်းပေးသြားမည်ျဖစ်ပြီး၊ အဆိုပါ ခေ်းငြေမ်ား ကို ၂၀၂၀ ခုနွစ် ဧပြီလ (၁၅) ရက်နေ့ နောက္ဆုံးထား ပေးဆပ်ရမည်ျဖစ်သည်။ ခေ်းငြေနှုန်းထားမွာ စပါး သီးနွံ တစ်ဧကလ်ွင် က်ပ် တစ်သိန်းခြဲနှုန်း၊၊ အျခားသီးနွံမ်ားအတြက် တစ်ဧကလ်ွင် က်ပ် တစ်သိန်းနှုန်ျးဖင့် ယခင္နွစ် နှုန်းထားအတိုင်း ခေ်းပေးသြားမည်ျဖစ်သည်။
“ မနွစ္ကေခ်းငြေက အကြမ်းမ်ဉ်းအာျးဖင့် ရာခိုင္နှုန်း ၆၀ လောက်ျပန်ရထားပြီးပါပြီ၊ ဒီနွစ္မွာတော့ က်ေပြီးသား လယ်သမားတြေကိုပဲ ခေ်းသြားမွာပါ။ ငြေခ်းကာလက စက္တင္ဘာထိ ရွိတာကိုး။ အဲကြားထဲမွာ ဆပ်ရင်း၊ က်ေရင်း၊ ခေ်းရင်းနဲ့ အဲလိုသြားတာပေါ့။ ခေ်းငြေ အသစ်ခေ်းမယ္ဆိုရင်တော့ အခ်ိန်စေ့တဲ့ အေကြးတြေ က်ေဖို့ တော့လိုတယ်။ အဲစည်းကမ်းခ်က္ကေတာ့ ရွိတယ်လေ။ မိုးခေ်းငြေက ဧပြီ ၁၅ ရက္ကို နောက္ဆုံးထား ဆက်ရ မွာပါ။ ဒီကာလထက် ကေ်ာ်ပြီး မဆပ္နိုင္တဲ့သူတြေလည်း ရွိနေပါတယ်။ အထိုက်အေလ်ာက်ပေါ့။ ဆိုတော့ က်ေတဲ့သူတြေကို အရင်ခေ်းသြားမွာပါ ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ယင်းခေ်းငြေအား ခေ်းပေးရာတြင် ယခင္နွစ္ကဲ့သို့ တောင်သူတစ်ဦးခ်င်း ပိုင္ဆိုင်သော လယ်ယာ လုပ္ပိုင္ခြင့် လက္မွတ် ပုံစံ (၇) မူရင်းကို လယ်ယာဘဏ်သို့ အေပါင်အျဖစ် ပေးအပ်၍ တောင်သူ တစ်ဦးခ်င်း ကိုယ္တိုင် အာ မခံသည့် စနစ်ျဖင့် ထုတ်ခေ်းပေးသြားမည်ျဖစ်သည်။ ယခင္က ၀ိုင်ကြီးခ်ုပ္ပုံစံ အဖြဲ့လိုက် အာမခံစနစ်ျဖင့် ခေ်း ငြေ ထုတ်ခေ်းပေးချဲ့ခင်ျးဖစ်သည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မှုဝါဒမ်ားနွင့်အညီ လယ်ယာစိုက္ပ်ိုးရေး လုပ်ငန်းအတြက် လိုအပ်သော စိုက္ပ်ိုးစရိတ်ခေ်း ငြေမ်ားကို တောင်သူလယ်သမားမ်ားအာျးမန္မာ့လယ်ယာ ဖြံ့ဖြိုးရေးဘဏ္မွ တစ္ဆင့် ရာသီအလိုက် ထုတ် ခေ်းပေးလ်က်ရွိရာ ယခုအစိုးရသစ် လက္ထက္တြင် တစ်ဧက ခေ်းငြေနှုန်းထားမ်ားကို တိုျးမွင့်ထုတ် ခေ်းပေးခဲ့ သည်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင် စပါးခေ်းငြေ နှုန်းထားကို တစ်ဧကလ်ွင် က်ပ် (၁)သိန်းမွ တစ်သိန်းခြဲသို့လည်း ကောင်း၊ အျခားသီးနွံကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင် က်ပ် ၂၀,၀၀၀ မွ ၅၀,၀၀၀ သို့လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင် က်ပ် ၅၀,၀၀၀ မွ က်ပ် ၁၀၀,၀၀၀ သို့လည်းကောင်း တိုျးမွင့်ထုတ်ခေ်းပေးခဲ့သည်။
I wanted to post youabit of note just to give thanks again about the superb information you have featured in this article. It's certainly wonderfully open-handed of people like you to grant extensively whatanumber of people would've advertised as an electronic book to generate some money on their own, most notably considering that you could have done it in the event you desired. These smart ideas likewise served as the fantastic way to fully grasp many people haveasimilar passion just as mine to figure out good deal more regarding this problem. I'm sure there are millions of more enjoyable situations in the future for many who read through your blog.
by http://www.nike-airmax2017.us.com at June 08 2019
I wanted to write youavery small note to thank you so much as before about the stunning basics you've contributed in this case. It is simply particularly open-handed of people like you to convey freely allalot of people would have sold for anebook to earn some dough for themselves, even more so now that you could possibly have tried it if you considered necessary. Those tricks in addition acted as the great way to understand that the rest haveasimilar interest much like my personal own to know the truth way more related to this issue. I'm certain there are numerous more pleasurable situations ahead for many who read through your blog post.
by http://www.goldengooseoutlet.us at June 04 2019
I precisely desired to thank you very much all over again. I am not sure the things that I might have made to happen in the absence of the type of tips and hints discussed by you concerning such area of interest. It actually wasadistressing problem in my circumstances, nevertheless discovering your specialized avenue you processed the issue forced me to cry for fulfillment. Now i am grateful for this service as well as expect you are aware ofagreat job that you're doing teaching the others all through your site. I am sure you have never encountered any of us.
by http://www.yeezy-boosts.us.com at May 31 2019
I wish to point out my passion for your kindness giving support to men and women who need help on that subject matter. Your very own dedication to passing the message across turned out to be certainly effective and has in most cases encouraged professionals just like me to arrive at their pursuits. Your entire useful publication impliesawhole lotaperson like me and still more to my peers. Regards; from each one of us.
by http://www.jordansshoes.us.org at May 27 2019
Thank you for each of your hard work on this web page. Betty really loves managing internet research and it is easy to understand why. A number of us hear all relating to the dynamic form you offer priceless tips on your web blog and therefore improve contribution from other individuals about this idea while my princess is withoutadoubt discoveringalot of things. Have fun with the rest of the year. Your carrying outastunning job.
by http://www.kd-10.us at May 23 2019
I want to show thanks to this writer just for rescuing me from this particular setting. Because of checking through the online world and obtaining views which were not productive, I figured my entire life was well over. Existing without the presence of approaches to the issues you've fixed through your main site isacritical case, as well as ones that would have inanegative way damaged my career if I hadn't come across your web site. Your good competence and kindness in touching all the stuff was tremendous. I don't know what I would have done if I hadn't come across suchapoint like this. I can at this point look ahead to my future. Thanks for your time very much for your impressive and sensible guide. I won't think twice to suggest the blog to anyone who needs to have support on this subject.
by http://www.guccibelt.us.com at May 19 2019
I enjoy you because of each of your effort on this web site. My mum really loves conducting internet research and it's obvious why. Almost all know all about the powerful manner you create very important tactics by means of this web blog and even foster contribution from other ones on that subject matter and our own child is certainly being taughtalot of things. Enjoy the rest of the year. You're doingaglorious job.
by http://www.michael--korsoutlet.us.org at May 15 2019
I simply wanted to write downasimple comment in order to appreciate you for all the pleasant tips and hints you are sharing on this site. My prolonged internet investigation has at the end been paid with reliable know-how to write about with my company. I 'd assert that we website visitors actually are definitely fortunate to exist inadecent place with very many lovely people with beneficial opinions. I feel pretty fortunate to have discovered your entire weblog and look forward to so many more fabulous times reading here. Thank you once again for all the details.
by http://www.birkinbag.us.com at May 10 2019
I together with my buddies were actually studying the best helpful tips located on your website while suddenly came up withaterrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those tips. The young boys are actually so very interested to read all of them and already have definitely been enjoying these things. Appreciation for indeed being indeed considerate as well as for picking varieties of smart issues millions of individuals are really desirous to be informed on. Our sincere regret for not saying thanks to sooner.
by http://www.guccibelt.us.com at May 06 2019